Fiarovana mavitrika | Nanoradar namoaka 450 metatra faritra AI Radar Video Surveillance System-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.,
Security Security | Navotsotra i Nanoradar 450 Rafitra Fanaraha-maso Video Radg régioner AI
Fotoana: 2018-08-29 Hits: 32
Mba hamahana tsara kokoa ny fangatahana fangatahana fiarovana ho an'ny fiarovana mavitrika sy ny fahombiazana tsara eo ambanin'ny tontolo henjana dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny radar AI farany lava i Nanoradar —— NSR300WVF。
NSR300WVF dia rafitra fampitandremana fiarahan'ny radar amin'ny faritra. Raha vantany vao miditra ao amin'ny faritra fiarovana ianao, miarena fampitandremana mialoha ny radara ary tadiavo tsara amin'ny alàlan'ny fitiliana ny halaviran'ny tanjona, ny zoro ary ny hafainganana. Ny horonan-tsary dia natambatra tao amin'ny rafitra mba hamerenana ny tanjona kendrena hamaritana raha tokony ho taitra izy。
NSR300W dia mampiasa teknolojia mamorona tariby nomerika (DBF) hampitombo ny halaviran'ny fikarohana azy hatramin'ny 450 metatra ary hanatsara ny fahamendrehana fandrefesana, izay miantoka ny fahombiazan'ny fanaraha-maso kendrena azo antoka. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny haitao fanasokajiana mifototra amin'ny fianarana milina, ny radara dia afaka mahatsapa ny fanasokajiana manan-danja amin'ny kendrena fidirana an-tsokosoko, ao anatin'izany ny olona, ​​ny fiara, ny hazo sns.
IP66, 7 × 24h fiarovana amin'ny fotoana tena izy amin'ny toetr'andro rehetra, azo ovaina amin'ny toetr'andro ratsy toy ny orana, lanezy, zavona, zavona, fasika sy vovoka sns ；
Radar active dia manome fampitandremana mialoha momba ny mpiditra an-tsokosoko, izay hiteraka fakan-tsary hanarahana ny lasibatra amin'ny fotoana tena izy ary handrakitra ny fampahalalana fanairana avy eo fidirana amin'ny foibe fanaraha-maso ；
Manan-tsaina sy azo itokisana
Ny algorithm manan-tsaina dia manampy ny rafitra hanivana amin'ny fomba mahomby ny hazo mikosoka sy bibikely hampihenana ny fanairana diso ary hanatsara ny fahitana ny fahitana ；
Ny rafitra dia manana maritrano malalaka, izay afaka miditra amin'ny sehatra fiarovana isan-karazany。
Teknolojia mamorona andry nomerika (DBF)
Raha ampitahaina amin'ny radar tokana nentim-paharazana, ny radar DBF dia manana herinaratra fandefasana kely kokoa rehefa mahita ny tanjona amin'ny halavirana iray ihany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny radar DBF dia afaka mamantatra lasibatra amin'ny halavirana lava kokoa noho ny radar tokana miaraka amin'ny herinaratra mampita
Fandefasana radara maro
Ny teknolojia mamorona tarika nomerika dia mampitombo tsara ny elanelam-pandrefesana radara ary manatsara ny fahitsiana fandrefesana zoro, izay mety hahatratra ny zanabola marina amin'ny fotoana tena izy. Raha ampitahaina amin'ny haitao maro-bika analog, ny teknolojia DBF dia manana tombony ambany kokoa: mora vidy, mora mahatsapa izay vovo
Teknolojia fanasokajiana manan-tsaina ho an'ny tanjona kendrena
Ny iray amin'ireo antony nanehoan'ny radars tombony miavaka eo amin'ny sehatry ny fiarovana dia ny fahaizan'ny radars mamantatra ny tanjon'izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia mitarika olana fa ny hazo mikitroka sy ny ahitra dia hitan'ny radara ihany koa. Ireo lasibatra ireo dia antsoina hoe lasibatry ny fanairana diso. Mba hahafahana manavaka tsara kokoa ireo karazana kendrena sy lasibatry ny fanairana diso dia ampidirina ny fomba fanasokajiana mifototra amin'ny fianarana milina toy ny SVM sy CNN. Ity algorithm ity dia manangona angon-drakitra marobe ary manofana ireo modely algorithm. Nahavita vokatra fanasokajiana tsara tamin'ny fampiharana azo ampiharina, izay afaka manavaka tsara ny olona, ​​ny fiara, ny hazo ary ny tanjona hafa.
Sehatra fampiharana mahazatra:
Ny rafitra NSR300WVF dia azo ampiharina amin'ny tranomaizina, toby famokarana herinaratra, seranam-piaramanidina, dike amoron-drano, seranan-tsambo ary toerana manan-danja hafa dia mitaky ambaratonga avo lenta miaraka amin'ny tontolo andro, ny toetrandro rehetra ary ny fiarovana fiarovana mavitrika.
Nanoradar dia tokony hanao ireo hetsika traikefa maimaimpoana, azafady mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa raha mila izany！
Nanoradar indrindra ny fivarotana ireo fiara an'habakabaka tsy manam-paharoa, ny fiarovana ambony, ny fitaterana saina, ny fiarovana ny fiara, ny fiara tsy voatanisa ary ny sahan'asa hafa, miaraka amin'ny vokatra misy 24TVz, 60GHz, 77GHz. Ny fampandrosoana haingana ny orinasa tato anatin'ny taona vitsy, dia nandresy vondrona mpanjifa betsaka i Nanoradar tamin'ny fiarovana, fitaterana, UAV ary indostria hafa.
MANARAKA : Inona no atao hoe Rafitra Fanaraha-maso Radar?